Ny daty fandefasana OnePlus 6T dia nohamafisina tany Eropa | Androidsis
Omaly voamarina izany la Daty fampisehoana OnePlus 6T. Ny avo lenta amin'ny marika sinoa dia iray amin'ireo telefaona andrasana indrindra amin'ity fararano ity. Miaraka amin'ity maodely ity, ny orinasa dia mitady ny hitazomana ny taonany tsara, izay nahitany ny fitomboan'ny varotra maodely teo aloha. Talohan'ny nanamafisana ny datin'ny famelabelarany dia nisy ny tsaho momba ny daty namoahany azy.
Vinavina ny olona fa hanomboka amin'ny volana Novambra ny telefaona. Zavatra toa toa izany ihany tamin'ny farany, na dia amin'ny daty hafa noho ny nandrasana aza ny fahatongavan'ity OnePlus 6T any Eropa ity.
Efa nanamafy izany ny orinasa, Amin'ny 6 Novambra, ny OnePlus 6T dia havoaka amin'ny fomba ofisialy any Eropa. Ka tsy amin'ny 1 Novambra io raha efa tafaporitsaka teo aloha. Andro vitsivitsy tsy nitovizany tamin'ny fivoahan'ny omaly maraina.
Tsy i Eropa no ho aleha voalohany amin'ity OnePlus 6T ity. Hatramin'ny alohan'ny fandefasana azy any amin'ny kaontinanta taloha, antenaina hivoaka any India ny telefaona. Ny 2 novambra izao vao hanomboka amin'ny fomba ofisialy any India. Nanjary iray amin'ireo tsena lehibe indrindra ny firenena.
Noho izany, ny marika sinoa dia mitady hampitombo ny fisiany eto amin'ity firenena ity. Araka ny ny ampahany avo lenta dia mitombo betsaka koa. Ka India no firenena voalohany manerantany izay ahafahana mividy an'ity OnePlus 6T ity. Avy eo dia hanaraka an'i Eropa manontolo.
Ny hetsika fampisehoana dia atao amin'ny 30 Oktobra an'ny fitaovana any New York City. Hetsika iray izay tsy isalasalana fa hiteraka fanantenana, ary azo atao ny manaraka mivantana amin'ny fantsona YouTube an'ny marika sinoa. Rehefa mahazo vaovao momba ny fandefasana telefaona izahay dia hampahafantatra anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny daty fandefasana ny OnePlus 6T any Eropa dia ofisialy izao
Fitaovana Google Pixel 3 rehetra
Ny famaritana sy ny sarin'ny Honor 8C dia hita ao amin'ny VMall: ny telefaona voalohany miaraka amin'i SoC SD632